Archdiocese of Mandalay blog: November 2008
အိုသခင် လူမိုက် ကျွန်တော်
ဒေါသထောင်လွှား ရန်စောင်ကြည့်နှင့် ကြည့်ခဲ့လေရဲ့ ...
အတ္တကို ခုချ မာနကိုစွန့်
. J - ဇော်လတ်အောင် (ရွှေဘို)
ခုတလော ဘလောက်မှာ သီချင်းလေးတွေမတင်ဖြစ်တာ ကြာသွားပြီ။ အဲတော့.. the top of Pops ဆိုပြီး အရမ်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ အိုင်းရစ် ဘုန်းတော်ကြီးသုံးပါးရဲ့ The Priests ဆိုတဲ့ စီးရီးကို Sony BMG ကနေ ဒေါ်လာ တစ်မီလျှံနဲ့ (US$ 1.27 million) စာချုပ်ချုပ်ခဲရာကနေ Pop လောကရဲ့ ထိပ်ကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဘုန်းတော်ကြီးသုံးပါးက Fr Eugene O'Hagan, Fr. Martin O'Hagan, Fr David Delargy တို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရရှိတဲ့ ငွေတွေကိုလည်း ဂရုဏာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုသွားမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ YouTube ကနေ ရှာပြီးနားထောင် ကြည့်တော့ အတော်လေးကောင်းပါတယ်။ အဲဒီထဲကနေ အခုဆို ခရစမတ်လည်း နီးလာပြီမို့ ခရစမတ်သီချင်းဖြစ်တဲ့ O Holy Night ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆက်ပြီးနားထောင်ချင်ရင်တော့ You Tube မှာ ဆက်လက်ရှာပြီးနားထောင်ကြပေါ့ နော်..။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 6:03 AM
အဘယ့်ကြောင့် ကက်သလစ်ကျမ်းစာတော်မြတ်တွင် ကျမ်း (၇၂)စောင်ရှိရသနည်း။
“ဘာရု ပရောဖက်ကျမ်း” (Baruch) သည် ပရိုတက်စတင့် ကျမ်းစာတော်မြတ်တွင် မပါဝင်ဘဲ ကက်သလစ်ကျမ်းစာတော်မြတ်တွင်သာ ပါဝင်သော ဓမဟောင်းကျမ်း (၇)စောင်ထဲမှ တစ်စောင်ဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်းများကို ကက်သလစ်တို့က “ဓမဟောင်းတွဲဖက်ကျမ်း”များ Deuterocanonical ဟုခေါ်ကြသည်။ ပရိုတတ်တစတင့် တို့ကမူ “အာပိုခရိပါ” Apocryphalဟုခေါ်ကြသည်။ (မြန်မာနိုင်ငံတွင် “အပယ်ခံကျမ်း”ဟု အသုံးရှိခဲဖူးသည်။) ထိုဓမဟောင်းကျမ်း (၇)စောင်တွင် ပါဝင်သော ကျမ်းများမှာ တိုဘိဝတု (Tobit)၊ ဂျူဒစ်ဝတု (Judith)၊ ဘာရုပရောဖက်ကျမ်း (Baruch)၊ မကာဘေးဦးသမိုင်း (ပထမတွဲနှင့် ဒုတိယတွဲ) (1 and2Maccabees) ဥာဏ်ပညာကျမ်း (Wisdom, or wisdom of Solomon) ၊ နိတိဒေသနာကျမ်း (Sirach, or Ecclesiasticus) တို့ဖြစ်ကြသည်။
ထိုဓမဟောင်းတွဲဖက်ကျမ်းများသည် ဘီစီ (၃)ရာစုခန့်က ဂရိဘာသာသို့ ပြန်ဆိုထားသော ဓမဟောင်းကျမ်း (Septuagint)တွင် ပါဝင်ကြသည်။ အဆိုပါ ဓမဟောင်းကျမ်းသည် တမန်တော်ကြီးများနှင့် ၄င်းတို့ နောက်ပိုင်း မျိုးဆက်များ အသုံးပြုခဲ့သည့် ကျမ်းစာတော်မြတ်လည်းဖြစ်သည်။ ဂ၇ိဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော ဓမဟောင်းကျမ်းများထဲမှ အစောဆုံးလက်ရေးမူများဖြစ်သည့် Codex Sinaiticus (fourth century) နှင့် Codex Alexandrinus (c.450) တို့သည် အထက်ဖော်ပြပါ ဓမဟောင်းများကို အခြားသော ကျမ်းများနှင့် အတူ ထည့်သွင်းထားကြသည်။
ခရစ်နှစ် ၃၄၉ ခုနှစ်တွင် ဟိပိုမြို့တွင် ပြုလုပ်သော ခရစ်ယာန်သာသနာ့စည်းဝေးကြီးနှင့် ၃၉၇ခုနှစ် နှင့် ၄၁၉ ခုနှစ်တို့တွင် ကာသေ့ခ်ျမြို့တွင် ပြုလုပ်သော စည်းဝေးပွဲ ကြီးတို့က ထိုကျမ်း (၇)စောင်ကို အခြားသော ကျမ်း(၆၆)စောင်နှင့် အတူ ကျမ်းစာတော်မြတ်တွင် ထည့်သွင်းအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုအတည်ပြုချက်ကို ကမာလုံးဆိုင်ရာ အသင်းတော် (Universal Church) ကလည်း လက်ခံခဲ့သည်။ (၁၆) ရာစုတွင် ထရင့်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သော ခရစ်ယာန် သာသနာ့စည်းဝေးပွဲကြီးကလည်း ထိုကျမ်းများကို အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
သို့ဖြစ်လျှင် အဘယ့်ကြောင့် ပရိုတက်စတင့်တို့က အဆိုပါကျမ်းများကို ၄င်းတို့၏ ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲမှ ထုတ်ပယ်ထားသနည်း။ အမှန်တကယ်တွင် သြဇာတိကမရှိသော ပရိုတက်စတင့်ပြုပြင်ရေးဝါဒီ မာတင်လူသာ (Martin Luther) က ၄င်းတို့ကို ပယ်ဖက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းအတွက် ကျမ်းစာတော်မြတ်သည်သာ အဓိကကျသည်ဟု အပြင်းအထန် သွန်သင်ခဲ့သော်လည်း သူ၏ သွန်သင်ချက်ကို မထောက်ခံသော ကျမ်းချက်များရှိပါက ထိုကျမ်းချက်များပါဝင်သော ကျမ်းများ၏ အရေးပါမှု့ကို ငြင်းဆိုလေ့ရှိသည်။
ဓမဟောင်းတွဲဖက်ကျမ်းများတွင် သေသူတို့အတွက် ဆုတောင်းပေးခြင်းနှင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းများကို ထောက်ခံအားပေးသော ကျမ်းပိုဒ်များပါဝင်ကြသည့်အပြင် ငရဲငယ် (Purgatory)တည်ရှိကြောင်းကိုလည်း သွန်သင်ထားသည် (၂ မကာ ၁၂း၃၉-၄၆)။ မာတင်လုသာသည် ထိုရှေးဟောင်းသွန်သင်ချက်နှင့် အသင်းတော်၏ ကျင့်ကြံချက်များကို ပစ်ပယ်ကာ ထိုကျမ်းများကို ပရိုတက်စတင့်ကျမ်းစာတော်မြတ်အတွင်း ထည့်သွင်းရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
ဓမဟောင်းတွဲဖက်ကျမ်းများတွင် ပါဝင်သော ကျမ်းများသည် အခြားသော ဓမဟောင်းကျမ်းများနှင့် ရေးသာသည့် ပုံစံဆင်တူသည်။ ဥာဏ်ပညာကျမ်းနှင့် နိတိဒေသနာကျမ်းတို့သည် ပညာအလိမာကျမ်းနှင့် အတော်ပင်တူသည်။ တိုဘိဝတုသည် ယောဘ၀တုကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ ဂျုဒစ်ဝတုသည်လည်း အက်စတာဝတုနှင့် အလားသဏ္ဍာန်တူသည် (ဟေဗြေဦး အမျိုးသမီးသူရဲကောင်းနှစ်ဦးသည် မိမိတို့၏ လူမျိုးကို ကယ်တင်ရာတွင် ကူညီခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်) မကာဘေးဦးသမိုင်း ပထမတွဲနှင့် ဒုတိယတွဲတို့သည် ဓမရာဇ၀င် ဒုတိယစောင် - တတိယစောင်၊ ရာဇ၀င်ချုပ် ပထမစောင် ဒုတိယစောင်တို့ကဲသို့ သမိုင်းအဖြစ်အပျက်များကို တင်ပြထားသော ကျမ်းများဖြစ်ကြသည်။ ဘာရုပရောဖက်ကျမ်းသည်လည်း ဂျေရေမိယ (Jeremiah) ပရောဖက်ကျမ်းနှင့် အလားသဏ္ဍာန်တူသည်။
ဓမသစ်ကျမ်းသည်လည်း ဓမဟောင်းတွဲဖက်ကျမ်းများမှ တွေးခေါ်ချက်များကို ကျမ်းချက်အတော်များများတွင် ထပ်တူနီးပါးပြန်ပြောင်းပြောဆိုထားသည်။ ဥပမာ- ဗျာဒိတ်တော်ကျမ်း ၁း၎ နှင့် ၈း၃-၄ တို့သည် တိုဘိဝတု ၁၂း၅၁ ကို ကိုးကားထားဟန်ရှိသည်။ ကော်ရန့်သုသြ၀ါဒစာ ပထမစောင် ၁၅း၂၉ သည် မကာသြ၀ါဒစာ ၁၁း၃၅ သည် မကာဘေးဦးသမိုင်း ဒုတိယတွဲ ၇း၂၉ ကို ပြန်လည်ထင်ဟပ်ပြနေလေသည်။
သံပေါလူးနှစ် အထိမ်းအမှတ် အမှတ်အသား လိုဂို ၏ အဓိပါယ်
သံချိမ်းကြိုး မှာ သံပေါလူးသည် ရောမမြို့၏ အကျဉ်းသားဖြစ်ခဲ့ခြင်းကို ဖော်ဆောင်ပါသည်။
ဓါး ၏ အဓိပါယ်နှစ်မျိုးမှာ တချိန်က သံပေါလူးသည် ခရစ်ယာန်များကို နှိပ်စက်ညှင်းဆဲသောသူ တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် နောက်တမျိုးမှာ သံပေါလူးသည် ရောမလူမျိုးဖြစ်သဖြင့် အခြားသော ဓမအာဇာနည်များကဲ့သို့ လက်ဝါးကားတိုင်တွင်တင် သတ်ခြင်း၊ ကျောက်ခဲဖြင့် ပစ်ပြီး သတ်ခြင်းများမခံရဘဲ။ သံပေါလူးအား ခေါင်းဖြတ် သတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရကြောင်း သိရှိ အမှတ်ရစေရန်ဖြစ်သည်။
ကျမ်းစာအုပ် ၏ အဓိပါယ်မှာ သံပေါလူးသည် ဓမသစ်ကျမ်းတွင် ကျမ်းစာအများဆုံးရေးခဲ့သူ အဖြစ်ဖော်ဆောင်ပါသည်။
လက်ဝါးကားတိုင် သည် သခင်ခရစ်တော်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး သံပေါလူး ကော်ရိန့်သုသြ၀ါဒစာ(၁ ကော် ၁း၂၃) တွင် မိန့်ကြားထားသကဲ့သို့ “ငါတို့သည် လက်ဝါးကပ်တိုင် အတင်ခံရသော ခရစ်တော်၏ အကြောင်းကို ဟောပြောကြ၏”။
မီးတောက်မီးလျှံ သည် သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
၂၀၀၈-၂၀၀၉ မှာ သံပေါလူးနှစ် ကိုရည်ညွှန်းပါသည်။
၂၉-VI ဆိုသည် မှာ သံပေါလူးနှစ် စတင်သော ရက်နှင့် ပြီးဆုံးမည့် ရက်ဖြစ်သည့် (၂၉) ရက်၊ ဇွန်လ ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 6:13 AM
ယေဇူးဘုရင်ပွဲကို ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၉၂၅ ခုနှစ်မှာ ရဟန်းမင်းကြီး န၀မမြောက်ပီအူးက အသင်းတော်အတွင်း ကျင်းပဖို့ ပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲကို ကျင်းပဖို့ သတ်မှတ်တဲ့အချိန်ဟာ ဘုရားမဲ့ ၀ါဒတွေ ကြီးစိုးတဲ့အချိန် (သို့) ခရစ်တော် မပါလည်း ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံပေါင်းများစွာက တွေးထင်နေတဲ့ အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေဟာ ထင်သလိုတွေး၊ ထင်သလိုရေး၊ သဘောရှိလုပ်နေကြပြီး၊ မာနတရားကြောင့် ဘုရားတရားရဲ့ သြဇာ အာဏာအောက်မှာ မနေလိုကြတော့ပါဘူး။ ဘုရားပညတ်တော်များနဲ့ သီလပါရမီများကို ဥပေက္ခာပြုပြီး၊ ဘုရားရဲ့ အလိုတော်ကို မိမိအလိုဆန္ဒနဲ့ အစားထိုးနေကြတဲ့အချိန်၊ မျက်မှောက်ကမ္ဘာကြီးဟာ ဗြောင်းဆန်နေပြီး တရားမျှတရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလည်း အရေးနိမ့်နေရတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အဲဒီအချိန် မူဆိုလိုနီဆိုသူဟာ အီတလီမှာ စစ်အင်အားနဲ့ ဖက်ဆစ်ပါတီကို အစိုးရအဖွဲ့မှာ အာဏာ တည်မြဲအောင် လုပ်နေတဲ့ အချိန်၊ ဂျာမဏီ တစ်ဝန်းမှာ နာဇီပါတီရဲ့ ဟစ်တလာကလည်း စစ်အင်အား သုံးပြီး သောင်းကျန်းနေတဲ့အချိန်၊ စီးပွားရေးဟာလည်း အဖတ်ဆည် မရအောင် ကျနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ထက်ငါ အာဏာရဖို့ ရူးနေကြတဲ့အချိန်မှာ အသင်းတော်က သမ္မာကျမ်းစာ သွန်သင်ချက်အတိုင်း လူတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ဘ၀မှာ ဘုရားတရားကို နေရာပြန်ပေးပြီး ကိုယ်တော်ရဲ့ အစိုးတရပြုခြင်းကို ခံယူမှသာ ကမ္ဘာမှာ မေတ္တာတရားနဲ့ အေးချမ်းသာယာမှုကို ရရှိမယ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ ခရစ်တော်ကသာ ဘုရင်တို့ရဲ့ ဘုရင်ဖြစ်တယ်၊ မိမိတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရားကသာ ဘုရင်တကာတို့ရဲ့ ဘုရင် (အရှင်) ဖြစ်တယ်၊ ခရစ်တော်ဟာ စကြ၀ဠာရဲ့ ဘုရင်ဖြစ်တယ်၊ သူ့ရဲ့ နိုင်ငံတော်ဟာ ထာဝရတည်မယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို သတိပေးဖို့ ““ယေဇူးခရစ်တော် ဘုရင်ပွဲတော်”” ကို ကျင်းပဖို့ ရဟန်း မင်းကြီးက ကြေငြာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရဟန်းမင်းကြီးက ဒီပွဲကို သတ်မှတ်ကျင်းပ စေခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းနှစ်ခုကတော့ -
(၁) ““ငါတို့သည် ကိုယ်တော်အားဖြင့် သက် ရှင်၊ လှုပ်ရှား၊ ရပ်တည်လျက်ရှိကြ၏”” (တ မန် - ၁၇း၂၈) လို့ ဆိုထားတဲ့အတိုင်း လူတွေ ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစား ဘုရားသခင်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်က ဘယ် တော့မှ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လို့ မရနိုင် ဘူးဆိုတဲ့အချက်နဲ့၊
(၂) လူတွေဟာ မိမိကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရား သခင် (သို့) ယေဇူးဘုရင်အား ကျိုးနွံလက်ခံ ဖို့ မငြင်းဆန်သင့်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆို တော့ အဲဒီကျိုးနွံနာခံခြင်းအားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်း ချမ်းသာကိုရရှိမှာ ဖြစ်တာကို နားလည် လက်ခံကြစေရန်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်များ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နည်းပြောမယ် ဆိုရင်တော့ လူမှုရေးရာများမှာ ဘုရားတရားကို လစ်လျူရှုပြီး ဘုရားမရှိသလို နေထိုင်လှုပ်ရှားချင်တဲ့ အတွေးအခေါ်များကို တန်ပြန်ဆန့် ကျင်တဲ့ အနေနဲ့ရော၊ ခရစ်တော် ဘုရားရှင်ဟာ လူ့အဖြစ် ဇာတိကိုယူဆောင်ပြီး လောကကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ ဘုရားသားတော်ဖြစ်လို့ လူ့ဘောင်တစ်ခုလုံးအပေါ်မှာ နည်းမျိုးစုံ နဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အချက် ကိုပါ ထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
(ဒံလေယ အနာဂတ္တိကျမ်း- ၇း၁၄) မှာ ““ အရပ်ရပ်တို့၌နေ၍ အသီးအသီး၊ အခြားခြားသော ဘာသာစကားကို ပြောသော လူမျိုးတကာတို့ကို အုပ်စိုးစေခြင်းငှာ ထိုသူသည် နိုင်ငံနှင့်တကွ အာဏာစက် တန်ခိုးကိုရ၏။ အာဏာစက်တော်သည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက်တည်၏။ နိုင်ငံတော်သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်နိုင်”” ဆိုတဲ့ ဟောချက်က ခရစ်တော်ရဲ့ အရှင် သခင်၊ ဘုရင်ဖြစ်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းထားပါတယ်။
ယုံကြည်ခြင်းအချုပ်မှာ ကျွန်တော်တို့က ““ရှင်သူ၊ သေသူတို့ကို စီရင်စစ်ကြောတော်မူရန် ကြလာတော်မူလိမ့်မည်”” လို့ ၀န်ခံကြပါတယ်။ တစ်ချို့သော တရား ဟောသူများကြောင့်နဲ့ စီရင်စစ်ကြောခြင်း ဆိုတဲ့စကားကြောင့် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာလိုဖြစ်နေပါတယ်။ တကယ်တမ်းခရစ်တော်ကြလာခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းက သူကိုယ်တိုင် အကန့်အသတ်မရှိ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ဒုက္ခစရိယာခံပြီး အစပြုခဲ့တဲ့ ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ပြီးပြည့်စုံစေဖို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။ (ယောဟန်-၁၂း၄၇ ) မှာ ““လောက သားတို့ကို စီရင်အပြစ်တင်ရန်မဟုတ်၊ လောကသားတို့ကို ကယ်တင်ရန်သာ ကြ လာသတည်း”” လို့ ခရစ်တော်က အာမခံခဲ့ ပါတယ်။
နောက်ဆုံးသောနေ့မှာ ခရစ်တော်ဟာ ရှင်ဘုရင်အဖြစ် ထင်ရှားစွာ ကြလာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ ကျမ်းစာထဲက ပုံပမာအရ ခရစ်တော်ဟာ မထင်မရှားနဲ့ ဖုံးကွယ်မှုအောက်မှာ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေပါတယ်။ မထင်မရှားနဲ့ ဖုံးကွယ်မှုအောက်မှာဆိုတာ ခရစ်တော်ဟာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့သူတွေ၊ အစာရေစာ ငတ်မွတ်နေတဲ့သူတွေ၊ ဖျားနာပြီး ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ သူများမှာရှိနေပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ထပ်တူပြုထားပါတယ်။ ဆိုလိုတာက စားရမဲ့၊ သောက်ရမဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ သူကို အစားအသောက်ပေးကမ်းခြင်း၊ အ၀တ်ဆင်းရဲသူကို ဆင်မြန်းခြင်း၊ မတရားခံရသူတို့ဖက်မှ ရပ်တည်ပေးခြင်း၊ ဒုက္ခရောက်သူကို နှစ်သိမ့်အားပေးခြင်း၊ ဒီလို လူ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို စေတနာ သန့်သန့်နဲ့ လုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်နာမည်ကြီးဖို့၊ လူသိများဖို့ဆိုတာထက် လူသားတစ်ယောက် အတိဒုက္ခရောက်နေ တာကို မေတ္တာကရုဏာနဲ့ ကူညီလိုက်ခြင်း ဟာ မင်္ဂလာရှိပါတယ်။
ဒီလို ရက်ရောမှု၊ စေတနာမျိုးကို ခရစ်တော်က သူ့ကို ပြုလုပ်ပေးတာနဲ့ အတူတူပဲလို့ လက်ခံသတ်မှတ်တယ် ဆိုတာဟာ အင်မတန် အားရစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ လူသားအချင်းချင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကို လျော့နည်းစေခြင်း၊ ပျော်ရွှင်မှုတို့ကို တိုးပွားစေခြင်းဆိုတဲ့ လူ့လောက ကိစ္စရပ်တွေအားဖြင့် ထာဝရ ဘုန်းဂုဏ်တော်ဆီ အရောက်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ် ဆိုတာဟာ ဒီနေ့ကျမ်းစာရဲ့ သတင်းကောင်း တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်ဟာ အမှန်ကယ်ပဲ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ၊ ချို့တဲ့သူတွေအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူရှိနေပါတယ်။
လူတွေဟာ မိမိနေထိုင်တဲ့တိုင်း ပြည်ရဲ့ ဥပဒေအတိုင်း တရားစီရင်ခံရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ နိုင်ငံတော်မှာတော့ ဥပဒေသတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ (ယောဟန်-၁၃း၃၄) ကပြောပြတဲ့ ““သင်တို့ အချင်းချင်းချစ်ကြပါ”” ဆိုတဲ့ ဥပဒေပါပဲ။ လူ့လောကရဲ့ စာမေးပွဲတွေမှာတော့ ထူးချွန်တဲ့ ကျောင်းသားဟာ မထူးချွန်တဲ့ ကျောင်းသားထက် အခွင့်အလမ်း အများကြီးပိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခရစ်တော်ရဲ့ နောက်ဆုံး စာမေးပွဲကတော့ လူတစ်ဦး ချင်းစီတိုင်းဟာ အဆင့်အတန်း အတူတူပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ တခြားတစ်ဦးကို ချစ်ခြင်း မေတ္တာပြဖို့ ငါ့မှာ အရည်အချင်း မရှိဘူးလို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ အယုတ် အလတ် အမြတ် မရွေး၊ အသက် ဘယ်လောက်ကြီးကြီး ငယ်ငယ် အခြေအနေ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လောကမှာ ဘာပဲလုပ် ကိုင်လုပ်ကိုင် လူသားတိုင်းဟာ ခြင်းချက်မရှိ မိမိနဲ့ နီးစပ်သူတွေကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ပြနိုင်ပါတယ်၊ ချစ်နိုင်ပါတယ်။
ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှ စိန့်ဧလိဇဘက် (အေဒီ ၁၂၀၇-၁၂၃၁)ဟာပေးကမ်းစွန့်ကြဲ တဲ့အခါတိုင်းမှာဆင်းရဲသားတွေကို သူတို့ ကိုယ်တိုင်လည်းပေး ကမ်းစွန့်ကြဲမှု ပြုဖို့ အမြဲတမ်းနှိုးဆော်တတ်ပါတယ်။ ချို့တဲ့ သူတွေက သူတို့မှာပေး စရာငွေကြေး မရှိဘူး၊ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ပေးရ မှာလဲလို့ ဖြေတဲ့အခါမှာ ဧလိဇဘက်က ““သင်တို့ရဲ့ ငွေကြေးကိုပေးဖို့တော့သင်တို့ တတ်နိုင်ချင်မှ တတ်နိုင်မယ်။ ဒါပေမဲ့ဒုက္ခ အခက် အခဲ ရောဂါဝေဒနာရှိနေတဲ့ သူတွေကို မင်းတို့ရဲ့ မျက်စိနဲ့ မြင်နိုင်တယ်၊ ဆီကို သွားလည်ဖို့ မင်းတို့မှာ ခြေနှစ်ချောင်း ရှိတယ်၊ အားပေးနှစ်သိမ့်ဖို့ မင်းတို့ မှာ ပါးစပ်ရှိတယ်”” လို့ အမြဲတမ်း ပြောခဲ့ ပါတယ်။
ဒီပုံပမာမှာ ကျွန်တော်တို့ အမြဲတမ်း ဂရုမစိုက်၊ လျစ်လျူရှုတတ်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခုကို မီးမောင်း ထိုးပြ
ထားပါတယ်။ သူတို့ လုပ်ပြီးခဲ့တဲ့ အရာ အတွက် စစ်ကြောစီရင်ခံရတာမဟုတ်ဘဲ၊ မလုပ်ခဲ့လို့ ပျက်ကွက်ခဲ့မှုအတွက်သာ စီရင်ခြင်း ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ စဉ်းစားကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့ အများစုဟာ သိလျက်နဲ့ရော မသိလျက်နဲ့ပါ တွေးထင်ယုံကြည်လက်ခံ တတ်ကြတာက တစ်ပတ်တစ်ခါနဲ့ ပွဲလမ်းကလေး ရှိတဲ့အခါ ဘုရားကျောင်းကန်သွားမယ်၊ မကောင်းမှု ဒုစရိုက်ကို ရှောင်ကြဉ်မယ်၊ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်တော်မြတ်ပင့်မယ်၊ စက္ကရမင်တူးခံမယ် ဆိုရင် ငါတို့ဟာ ဘုရားတရားရှိပြီလို့ တွေး ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီအတွေးအခေါ်လေးကို အကျဉ်းချုပ်ကြည့်ရင် ငါဘယ်သူ့ကိုမှ မတိုက်ခိုက်၊ မတရား မလုပ်ဘူး။
ဘုရားကျောင်းသွားတယ်၊ ဥပုသ်စောင့်တယ်၊ ငါ့အလုပ်ငါ့လုပ်ငန်းငါလုပ်တယ် ဆိုတဲ့ သဘောတရားမျိုးပါပဲ။ ဒီလို
ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးက လူသတ်မှုမကျူးလွန်ဘူး၊ ခိုးလည်းမခိုးဘူး၊ သူတစ်ပါးရဲ့သားမယားလည်း မပြစ်မှားဘူး၊ မကောင်းတာရှောင် တယ်။ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ တစ်ခြားတစ်ဖက်မှာ ကောင်းမှုကုသိုလ် တစ်ခုမှ မလုပ်ဘူး။ အပြုသဘော၊ အကောင်းသဘောရှိတာတွေမှာ ပါဝင်မလုပ်ဆောင်ဘူး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကျမ်းစာမှာ ““ကောင်းမှုများကို လှည့်လည်ပြုလုပ် လျှက်ရှိ၏”” (တမန်-၁၀း၃၈) ဆိုတဲ့ ခရစ်တော်ရဲ့ ပုံစံနမူနာကို ကျွန်တော်တို့က အတုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ် ဘ၀အသက်တာအတွင်းမှာ နေ့တိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကူအညီကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ လိုအပ်တဲ့ သူတွေ အမြဲတမ်းပဲ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ရရှိလာတဲ့ အခွင့်အရေးကို အသုံးချပြီး ကောင်းမှုကို ပြုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ကူညီတယ်လို့ဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း ခန္ဓာကိုယ်၊ ဒြပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းပစ္စယနဲ့ ဆိုင်တာဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ ၀ိညာဉ်ရေး၊ လူမှုရေး၊ စိတ်ဓာတ်ရေးရာပိုင်း တွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသက်ကြီး တဲ့သူတွေ၊ ဖျားနာတဲ့ သူတွေဆီကို သွားရောက်လည်ပတ်ကြည့်ရှုမယ်။ သူတို့ကို နားထောင် ပေးမယ်။ အားနည်းချက်တွေ၊ မကောင်းအချက်တွေကို ခဏဖယ်ထားပြီး၊ အထင်လွဲခံရတဲ့သူတွေ၊ ပုံကြီးချဲ့ခံရတဲ့ သူတွေကို နားလည်မှုအားပေးမှုနဲ့ ဂရုစိုက် ပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတရံမှာ ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်တတ်တာက သူစိမ်းတွေ အပေါ်၊ အပြင်လူတွေ အပေါ်ကျ ကောင်းတတ်ပြီး၊ ကိုယ့်မိသားစု အပေါ်မှာတော့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ လူတွေရှိတတ်တယ်။ မိမိ အိမ်က အလုပ်သမားတွေ၊ အသိမိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်း အသက်ကြီးတဲ့အခါ၊ အလုပ်ထွက်တဲ့ အခါမှာ လုံခြုံမှုရှိဖို့ စီစဉ်ပေးမယ် စသဖြင့် မိမိတတ်နိုင်တဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့ ဘောင်တွင်းကနေ ကူညီ မှုပေးနိုင်ပါတယ်။
အလှူဒါနနဲ့ ပတ်သက်ပြီး (တိုးဘိယ၀တ္ထု- ၄း၇-၁၂) မှာ ““ သင်ပိုင်ဆိုင်ရာထဲမှ အလှူဒါန ပြုလော့။ အဘယ်ဆင်းရဲသူ တစ်ဦးဦးကိုမှသင်မျက်နှာ မလွှဲလေနှင့်၊ ဤသို့ဖြင့်ဘုရားသခင်၏ မျက်နှာတော်သည်လည်း သင့်အားလွှဲရှောင် သွားမည် မဟုတ်ချေ။ ငါ့သား သင်ပိုင်ဆိုင်သည့် အရာများနှင့် အချိုးညီစွာ စွန့်ကြဲ ပေးကမ်းလော့။ သင်သည် ကြယ်ဝလျှင် ဖောဖောသီသီ ပေးကမ်းလော့။ သင့် တွင် အနည်းငယ်မျှ ရှိလျှင်လည်း ထိုအထဲမှ အနည်း အကျဉ်းကိုပင်လျှင် ကျေနပ်အားရစွာ ဝေငှပေးကမ်းလော့။ လှူဒါန်းရန် မတွန့်တိုလေနှင့်။ ဤနည်းအားဖြင့်သာလျှင် သင်သည် ချို့တဲ့တောင့်တမည့် နေ့ရက်တွင် သင်အဖို့ ကြီးစွာသော ရတနာကို သိုလှောင်စုဆောင်းထားမည်ဖြစ်၏။ အကြောင်းမူကား အလှူဒါနပြုခြင်းသည် အပြစ်ဒုစရိုက်နှင့် သေခြင်းမှ ကယ်တင်၍ ၀ိညာဉ်ကို ဘ၀အမှောင်၌ မထားရစေသော အကျိုးကျေးဇူးပေး၏။ လှူဒါန်းခြင်းသည် အမြတ်ဆုံးသော ဘုရားရှင် မျက်မှောက်၌ အဖိုးထိုက်သော ပူဇော်သက္ကာဖြစ်၏”” ဆိုတဲ့ နှိုးဆော်ချက်ကို တွေ့ရပါတယ်။(ဖိလိပ္ပိ-၂း၆-၇) အရ မိမိရဲ့ ဘုန်းအသရေတော်စွန့်ပြီး အစေခံရဲ့ ဇာတိကို ခံယူကာ သူတစ်ပါးအတွက် ပေးဆပ် အစေခံရင်း ဦးဆောင်လမ်းညွှန်အုပ်စိုးသူဖြစ်တဲ့ ခရစ်တော်ရဲ့ အုပ်ချုပ်စိုးပိုင်ခြင်းကို လက်ခံကာ နီးစပ်သူများကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် ထိုဘုရင်နဲ့အတူ အစေခံကြပါစို့။
လူ့လောက နောက်ဆုံးစာမေးပွဲရဲ့ ““သင်တို့အချင်းချင်း ချစ်ကြပါ”” ဆိုတဲ့ တစ်ခုတည်းသော မေးခွန်းကို လက်တွေ့ ဖြေကြားနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်း ခရစ်တော်ရဲ့ စိုးပိုင်အုပ်ချုပ်လမ်းညွှန်မှုကို ခံယူရင်း ထိုဘုရင်နဲ့အတူ ကောင်းကင်ဘုံမှာ စံမြန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါစို့။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 12:18 AM
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 9:49 PM